Pastor vaviri Stefan uye Mary Hallman rakarambidzwa kubva YouTube.
Mary Hallman kubva mhenyu nhepfenyuro yapfuura kusanganisira YouTube.
Vafundisi nomukurumbira Stefan uye Mary Hallman kuti YouTube gwara dzakapfigwa pasi YouTube nokuda "yakadzokorora kana zvakakomba kutyorwa YouTube wokuti unorambidza ruvengo kutaura."
"Utsotsi pamusoro kwavo urongwa"
Pastor vaviri Stefan uye Mary Hallman watuma ngaararame kubva Studio rake Myresjöfönster zvose pamusoro Facebook uye YouTube. Asi ikozvino zvavo YouTube gwara rakabviswa kubva Google-vaiva boka iri nhandare kuti vakaita "yakadzokorora kana zvakakomba kutyorwa ravo nemaitiro unorambidza ruvengo kutaura" .
Vafundisi vanotenda kuti ichi inhema nokuti vanoda vanhu vose, ivo kuparidza Evhangeri uye kunounza ose mapurogiramu vanoiona mukana kugamuchira Jesu.
Email kubva YouTube
Tumira kana shutdown sezvo Youtube akatuma Hall vake.
In email kuti Stefan Hallman vakazviwana ati "haagoni kuvhura, tinazvo kana nekusimudzira mumwe YouTube munhoroondo" . Suspension zvichava saizvozvo nokusingaperi uye pasi rose. Kuedza kuenda gwara ravo vakasangana chorugwaro ichi:
Kuedza kuona vhidhiyo kuti harisati midzi padandemutande, zvinoita sokunge ichi:
Stefan Hallman anoti pamusoro Facebook :
"Tiri kushamiswa uye zvinosuruvarisa zvikuru kuti yedu YouTube mugero pamwe 461 subscribers dzakavharika nokusingaperi."
Migero kurambidzwa kubva YouTube, taverenga uye akanzwa kakawanda kubva vakasimbisa dzavo mitemo . Kuchava vose vechiKristu uye dzisiri dzechiKristu. Recently I verenga kuti imwe nzira yechiKristu yakanga yakavharwa. A nzira I akaita pamusoro uye haana kubvumirana nezvose.
Ini akanzwawo kuti 200 migero Muslim avharwa pasi. Vakaita kumhanya Isis anoparadzirwa uye zvakawanda.
Ini akanzwawo kuti Youtube uchanyatsotsunga inoomesera saka tinogona kutarisira zvakawanda kuvharwa. Pano vaKristu uye vasiri vaKristu vanotambura.
Pachako, ndazvigadzirira kuti ndichapfuura Blogging uye kushandiswa mumagariro vezvenhau kwenguva refu sezvinobvira kuunza shoko raJesu Kristu. Izvi zvave nemafungiro angu kubva pakutanga sezvandakaita Website yangu Blog nzvimbo muna 2007.
Ndakafungawo kuti ndichashanda kunamatira Jesu kuitira kuti vanhu vawane mukana kumugamuchira uye vagoponeswa. Regai kurara nezvimwe zvinhu zvizhinji zvakadaro, izvo zvinogona zvose kujeka uye ngozi haachagoni kusvika shoko raJesu.